My freedom: Ready to fly
အဲ့လို နှုတ်ဆက်တဲ့ပုံကိုက တက်ကြွနေတာ။ တက်ကြွဆို မနက်ဖြန်သွားဖို့ အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ... ဟူးး မောတာ။ အခု ကင်မရာတွေ အားသွင်းနေတယ်။ မနက်ကျ အစောကြီးထ,ရမယ်... လေယာဉ်က ၈နာရီလောက် ထွက်မှာ။
လိုက်ပို့မယ့်လူလည်း မရှိတော့ အများကြီး မသယ်နိုင်ဘူး... ဒီလောက်ပဲကောင်းတယ် (^_^)။ ခရီးသွားဖို့ကို အမေတို့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ မသိဘူး။ အဲ့ဘက်က လိုင်းမကောင်းလို့ သူတို့နဲ့ စကားမပြောရသေးဘူး။ အစကတော့ မနက်ဖြန်မနက်ရောက်ရင် ညဘက်သွားမယ်ပြောတာပဲ။ သွားဆေးခန်းပြဖို့လည်း ပြောထားသေးတယ်။ အရင်ပြနေကျဆရာဝန်ဆီမှာပဲ Book လုပ်ပေးထားတယ်တဲ့။ ဘာမှဖြစ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးခန်းမပြတာအရမ်းကြာတော့ ဒီတိုင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပဲ။ ကန်ဒီငယ်ငယ်ကတည်းက သွားဆရာဝန်ဆို အရမ်းကြောက်တာ။ ကန်ဒီသိပ်မကြောက်တဲ့ သွားဆရာဝန်ဆိုလို့ အဲ့ဆရာဝန်ပဲရှိတယ်။ သဘောလည်းကောင်းတယ်။
အဖေနဲ့ အမေအတွက် လက်ဆောင်ဆိုတာ ဒါလေးလေ။ Massage လုပ်တဲ့ဟာလေး။ Vivo City, Giant က ၀ယ်လာတာ။ Discount လည်းရှိနေတော့ ပိုတန်တယ်။ ပုံမှန်ဈေးက SGD 100 ကျော်တယ် ထင်တယ်။ အဲ့ဒါကို SGD 70 နဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။ Design ကတော့ ကန်ဒီ့စိတ်ကြိုက်ရွေးထားတာ... Hello Kitty :P :P
ဒီရက်ပိုင်း နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ Album က Romanson Milestone 13... သီချင်းတော်တော်များများ ကောင်းတယ်။ ခက်တာက ဒေါင်းလို့မရဘူး (>.<)။ ပုံဆွဲရင်း သီချင်းနားထောင်ရတာကို သဘောကျတယ်။
Happy Birthday to Me!! ဒီနှစ်လည်း ဘတ်ဒေးကိတ်ရတယ် (:D)။ အဲ့လိုမျိုးတွေရရင် ပျော်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် သူများတကူးတကလုပ်ပေးရတယ်ဆိုပြီး အားလည်းနာတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ပေးတာနဲ့ရော ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ အတွေးလည်းဝင်တယ်။ စာဖတ်တဲ့သူတွေကတော့ "ပျော်စရာရှိတာ မပျော်ဘဲ ဘာတွေတွေးနေတာလဲ"ဆိုပြီး တွေးနေမလားပဲ။ ကန်ဒီ့အတွေးတွေက တခါတလေ အဲ့လိုပဲ -.-'
ဒီပိုစ့်ကို ကန်ဒီမရှိတဲ့အချိန်မှ တက်ဖို့ Schedule လုပ်ခဲ့မယ်နော်။ ကန်ဒီပြန်သွားတုန်း ပိုစ့်အသစ်မတက်ရင် ပျင်းနေကြမှာ စိုးလို့ (:P)။ ၁၂နာရီခွဲတော့မယ်။ အိပ်ပြီ...
Happy Birthday Candy. :) Haveawonderful trip back to Yangon with your beloved family.
Happy birthday. be always happy.
ကန်ဒီလေး မွေးနေ့ မှစ ငြိမ်းချမ်း ပြည့်စုံမှုတွေ ဒီထက် ဒီထက် ဖန်တီးနိုင်ပါစေနော်...။
လာလည်သွားပါတယ် ဟတ်ပီးဘတ်ဒေး ကန်ဒီလေး
Like your painting and idea.
Thank you!! It's not my idea. I'm still learning ^_^